March 25, 2022 AdminLeaveaComment on बच्चा नहुने महिलालाई ‘बच्चा’ हुने बनाइदिने भन्दै बाबा आफैं जुटेपछि….
बच्चा हुने बनाइदिने भन्दै बाबा आफैं जुटेको पाइएको छ । घ,टना उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊको हो । त्यहाँ काले बाबा नाम गरेको एक मानिस यसका लागि चिकित्सा विज्ञानले केही उपायहरु समेत पत्ता लगाएको छ । तर कोही कोही धार्मिक अनुष्ठानमा बिश्वास गर्छन् । शक्तिपीठ र बाबाहरुको भर पर्छन् ।
यस्तो कार्यमा संलग्न रहँदै गर्दा देखेर भिडियो बनाएका थिए । जसको भिडियो सोशल मीडियामा भाइरल स्थानीय मानिसहरूले बाबा, महिला र उनका एक व्यक्तिलाई यस्तो कार्यमा संलग्न रहँदै गर्दा देखेर भिडियो बनाएका थिए । जसको भिडियो सोशल मीडियामा भाइरल भएको थियो ।
प्रहरीले बाबालाई पक्राउ गरी जेल पठाएको छ ।जानकारीका अनुसार लखनऊको पुलिस स्टेशन हुसेनाबादका एक बाबाले बच्चा नहुनेलाई बच्चा हुुने बनाइदिने ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
अचानक काठमान्डौ यर्पोटमा यो के भयो? चिनियाँ मन्त्री ओर्लिने क्रममा प्रहरिको बाक्लो उपस्थिती
एकाबिहानै भूकम्प आएपछि भागाभाग, आज दिउसो भुकम्प आउन सक्ने भन्दै डरलाग्दो चेतावनी सचेत रहन आग्रह !
चारजना म्यादी प्रहरीको मृ,त्यु, ३९ जना घाइते
श्रीमानसँग सम्बन्धवि’च्छेद गरेपछि छोरासँग विहे गरेर ग,र्भवती..